Ndị Sumeri, ndị bi na Mesopotemia bụ ndị isi ojii - Afrikhepri Fondation
Tọsde, Jenụwarị 21, 2021
Darayọs eze ndị Peshia
SDika akwukwo nke Akwụkwọ Nsọ si kwuo, Nimrọd nwa Kush (Etiopia na Sudan) bụ onye guzobere Sumer. Ọ bụ ndị isi ojii a ka anyị ji mmepe na ọmụmụ nke mmepeanya a n'ihi na ọ bụ ihe ọmụma ha mere mere Sumer ka ọ dị elu. E gosipụtara eziokwu site na palettes Sumerian, n'ezie na nke ikpeazụ a anyị chọpụtara na ndị Sumer kpọrọ onwe ha " Ndị isi ojii »Ma kọwaa dị ka Kushites site ná mpụga osimiri Naịl iji biri na Eshia.
Ndị guzobere mmepe anya Mesopotamia mbụ bụ ndị ojii ojii. Mesopotemia bụ ala Akwụkwọ Nsọ nke Shinar (Sumer). Ndị Sumer doro anya n'otú ha si lee onwe ha anya. Ndị Sumer kpọrọ onwe ha sag-gig-ga, ndị nwere isi ojii.
Iji kọwaa akụkụ Akwụkwọ Nsọ nke ndị Sumer, Sir Henry Rawlinson ji asụsụ Etiopia mee ihe: Afan Oromo ma ọ bụ Oromiffa (Oromiffa) n’ihi na ọ maara na ndị Sumer sitere na Etiopia.
Henry Rawlinson ji akwụkwọ Jenesis iji chọpụta onye Mesopotemia bụ. O mere ka o doo anya na Aha Nimrọd nọchiri ndị izizi bi na Babịlọn ma ọ bụ ndị ezinụlọ nke Cham: ndị Kush, ndị Ijipt na ndị ọzọ nọchiri anya ha. Aha a sitere na ewu ewu n'etiti ndị a na-achụ nta agụ owuru (Nimri).
Ndị Sumer na ndị Ilam, dị ka ndị guzobere mmepe anya Indus, si Africa. Nke a bụ ya mere asụsụ Elamite na Sumerian ji nwee njikọ chiri anya na asụsụ Afrika na nke Dravidian.
Ndị Kush, bụ ndị si East Africa gaa Eshia ka ana-akpọ ndị Kush. Nke a pụtara ìhè nke ọma na aha ebe na aha chi. Ndị Kass, ndị isi ọchịchị Iran nwere akụkụ etiti Zagros. A na-akpọ chi ndị Kass Kashshu, nke bụkwa aha ndị mmadụ. KSH, aha aha a dịkwa na India. Iji maa atụ Kishkinthai, bụ aha enyere alaeze Dravidian oge ochie na South India. Ọzọkwa, ekwesiri icheta na ndị eze Sumer, a na-akpọkarị ha "ndị eze Kush". A na-akpọ isi ndị Kush na Central Asia Kushana.
Obodo Kush kachasị mkpa na Iran dị na Elam. Ndị Elam kpọrọ obodo ha KHATAM ma ọ bụ KHALTAM (Ka-taam). Isi obodo Khaltam nke anyi na-akpo Susa, ka ndi Aryan na-akpọ KHUZ (Ka-u-uz), ndị Sumer akpọrọ NIME (Ni-mai), ndị Elam were Kushshi (Cush-elle). Na ihe odide nke Akkadian, a kpọrọ ndị Elam GIZ-BAM (ala nke ụta) dịka Ta-Seti, (ala nke ụta), aha ochie nke Nubia.
Ọmụmụ banyere ndị Sumer, ndị Akkadians, ndị Asiria na ndị Elam bidoro site na ịkọwa ihe ederede cuneiform nke Henry Rawlinson dere (1851). Henry Rawlinson (1810-1895) nọrọ ọtụtụ ọrụ na East. Odi ka enwetala ya obi ojoo n’ihe banyere akuko. Daalụ maka ntụgharị asụsụ nke Behistun ederedeọ na-achọpụta na ndị Kush ma ọ bụ ndị Hamitic nke Akwụkwọ Nsọ tọrọ ntọala.
Rawlinson O juru anya na nyocha ya iji chọpụta na ndị guzobere Mesopotamian mmepeanya sitere na ndị Kush.
Nnukwu onye agbachitere Rawlinson, Edward Hincks (1792-1866). Hincks gara n'ihu n'ọrụ Rawlinson.
Onye na-amụ banyere Asiria Jules Oppert kọwapụtara na ndị guzobere mmepe anya na Mesopotemia kpọrọ onwe ha Ki-en-gi "ala nke ezi ndị nwenụ" (Kang, Tr. "Ndị bu ụzọ, Pra-nna", emesịa kwa Kangars).
Albert Terrien si LaCouperie mere ka o doo anya na ndị Sumer, ndị Akkadians na ọbụna ndị Asiria kpọrọ onwe ha Salmat kakkadi "ndị isi ojii", bụcha ndị isi ojii nke ndị Kush. Na mgbakwunye, ihe ncheta Behistun mere ka o doo anya na ndị Ilam nwekwara oji.
Ụgha ma ọ bụ Science site n'aka Dr. Clyde Winters
Akụkọ Ihe Mere amalite
9 ọhụrụ site na .8,99 XNUMX
5 ejiri site na 8,95
Emelitere ikpeazụ na Jenụwarị 20, 2021 8:35
Schoollọ akwụkwọ nke chịrị - Daeninckx Didier